Home Wararka (Daawo) Dagaal beeleed dib uga soo cusboonaaday Gobolka Sanaag
(Daawo) Dagaal beeleed dib uga soo cusboonaaday Gobolka Sanaag
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Gobolka Sanaag, Waxa saaka deggan xaaladda degaanka Fadhigaab oo ka tirsan Gobolka Sanaag halkaasi oo ay shalay ku dagaallameen laba malayshiya-beeleed. Dagaalka u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed waxaa inta la xaqiijiyay ku geeriyooday laba Ruux halka Saddex kale ay ku dhaawacmeen kuwaas oo dhamaantood ah dhinacyada dagaallamay ka tirsanaa.
Warbaahinta Somaliland ayaa ku soo warramay in saaka xaalad deganaansho ah laga dareemayo degaankaas balse ay weli is hor-fadhiyaan malayshiyaadkii dagaallamay. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay dagaalkaas ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka labada dhinac islamarkaana labada dhinac ay wada-hadal isu’gu yimaadaan.
Halkaan ka daawo Video dagaalka oo hub culus la isweydaarisanayo:
Previous articleSouthwest parliament extends Lafta-Gareen’s term by one more year
Next articleRW Kheyre oo waji gabax kala kulmay dalal uu dirsaday codsi la xiriira Covid-19
Buuq ka dhashay Agaasime xigen loo magacaabay hay’adda socdaalka & Jinsiyadda...
Kenya oo cadaadis xooggan wajaheysa, kadib xayiraadii duulimaadyada Soomaaliya